Agro Space: waa hage ku takhasusay beero-soo-saareyaasha beeraha - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Qeybta "Sheekada Guusha", bogga internetka ee majaladda "Nidaamka Baradhada" ayaa si caadiya u daabacda agabyada ku saabsan shirkadaha ay hawlahoodu la xiriiraan koritaanka baradhada. Laakiin maanta waxaan dooneynaa inaan ballaarinno baaxadda oo aan ka hadalno mashruuc caalami ah oo beeraha internetka ah oo ay abuureen dadaallada isku dhafan ee shirkadaha ka socda Kyrgyzstan iyo Tajikistan.
Waxay ku saabsan tahay Barxadda Agro Space IT.
Tani waa shaqo wadajir ah oo ka socda shirkadaha AgroInformAsia (Kyrgyzstan), Neksigol Navovar (Tajikistan) iyo hay'adda dadweynaha ee Neksigol Mushovir (Tajikistan).
AgroInformAsia waa shirkad macluumaad iyo la-talin ku takhasusay horumarinta aaladaha IT-ga ee loogu talagalay horumarinta isdhexgalka B2B, oo siisa macluumaad go'aan qaadasho wax ku ool ah, maareyn aqoon iyo latalin fog.
Nexigol Navovar waa shirkad ku takhasustay horumarinta aaladaha IT ee beeraha iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Nexigol Mushovir waa urur latalin dhanka beeraha ah oo sanad walba ka caawiya daraasiin shirkado beeraley yar yar iyo kuwa dhexdhexaad ah iyo kumanaan beeraley ah oo ku nool Tajikistan oo soo bandhiga teknoolojiyad casri ah oo ku saabsan wax soo saarka, farsamaynta iyo suuqgeynta wax soo saarka beeraha, kor u qaadista tayada badeecadaha isla markaana lagu gaaro kobaca faa'iidada.
Shirkaduhu waxay horey khibrad shaqo ugu lahaayeen: tan iyo sanadkii 2015, waxay si wada jir ah u soo saareen qalab kala duwan oo dhanka IT-ga ah waxayna ku dhex dalaceen dadka isticmaala Kyrgyzstan iyo Tajikistan.
2019, waxay abuureen barnaamijka 'Agro Space IT platform'.
Madasha waxaa loogu talagalay qof kasta oo ku lug leh ganacsiga beeraha, oo ay ku jiraan dawladda, ururrada sayniska iyo latalinta; shirkadaha horumarinta beeraha iyo miyiga.
Madalku wuxuu soo bandhigayaa aalado kala duwan oo IT ah, isticmaalkeeduna wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameyso go'aanno wax ku ool ah oo lagu maareeyo ganacsiga beeraha (iyadoon loo eegin qayb gaar ah).
Boggu wuxuu leeyahay isdhexgal Ingiriis, Kyrgyz, Russian iyo Tajik.
Sannadkii furitaankiisa, barnaamijka 'Agro Space platform' wuxuu la saxeexday heshiis iskaashi oo lala yeeshay Hay'adda Aan Dawliga Ahayn ee Ruushka "Xarunta Aqoonta ee Digitalization Agro-Industrial Complex" (Tambov).
Barxadda Agro Space IT waxay ku guuleysatay kaalinta labaad ee tartanka caalamiga ah ee mashaariicda hal-abuurka ah "Eurasia digital formats 2019", oo ay soo qabanqaabiyeen Guddiga Dhaqaalaha ee Eurasia. Tartanka, madalku wuxuu soo bandhigay aaladda E-Agro Map.
Khariidadda E-Agro waa khariidad elektiroonig ah oo beeralay ah oo kuu oggolaanaysa inaad go'aamiso soohdimaha beeraha, qiimeyso fursadaha abuurka 33 dalag, inaad xiriir la sameysid shirkadaha wax soo saarka iyo ganacsiga. Mashruucu wuxuu gacan ka geysanayaa hagaajinta go'aannada la gaadhay (wuxuu gacan ka geysanayaa yareynta halista, wax soo saarka iyo kharashka gaadiidka, iwm.).
Hada dadaalada ay soosaarayaasha barnaamujku ku wajahan yihiin waxaa loogu talagalay hagaajinta aaladaha lagu soo bandhigo goobta isla markaana lagu dhiirrigeliyo heer caalami. Shirkado badan oo dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay ayaa muujinaya xiisaha wada shaqeynta Agro Space.
Madalku wuxuu siiyaa marin u helka 17 codsiyo moobiil oo gacan ka geysta sameynta wax soo saar hufan ee wax soo saarka beeraha kala duwan; waxaa jira guddiga ogeysiiska elektarooniga ah; waxaa jira maktabad elektiroonig ah, oo si joogto ah loogu cusbooneysiiyo tababarro cusub iyo qalab macluumaad.
Booqdayaasha Portal waxay isticmaali karaan khariidado elektaroonig ah oo leh macluumaad ku saabsan wax soo saarka 50 + dalag muddada 2012-2019 ee heer degmo; fiidiyowyo waxbarasho iyo macluumaad ah.
Madalku wuxuu bixiyaa macluumaad casri ah oo ku saabsan qiimaha suuqyada tafaariiqda ee wax soo saarka beeraha ee Tajikistan iyo Kyrgyzstan; xisaabiyeyaasha internetka ayaa la furay oo kuu oggolaanaya inaad xisaabiso xaddiga abuurka, bacriminta iyo biyaha markaad abuureyso dhowr nooc oo khudaar ah.
Marka la gaaro Oktoobar 2020, qiyaastii hal milyan oo isticmaaleyaal ah oo ka kala socda 40 + waddan ayaa isticmaalay awooda barnaamijyada. Malaha ilahaani https://agro-asia.com/ru faa iido kuu yeelan doonta adiguba?
Tags: GOOBTA AGRO
Noocyada warshadaha beeraha ee Ural ayaa laga yaabaa inay ka muuqdaan kaararka Rosselkhozbank - caano, ukumo, baradhada